पार्टीले उठाएको व्यक्ति नै हाम्रो उमेदवार हो । उसलाई जिताउने मेरो कर्तव्य हो । यो व्यक्ति, त्यो व्यक्ति भन्ने हुँदैन् । अन्त्यमा फेरी पनि भन्छु, दोहोरिने सोंचमा छैन्, सक्षम साथीहरु हुनुहुन्छ, मार्गप्रसस्त गर्छु ।
पाल्पा १० बैषाख ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ नजिकिदै छ । भोली र पर्सि मनोनयन दर्ताको समय छ । अहिले कुन दलबाट को उमेदवार बन्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उमेदवार छनौट भईसकेको छैन् । अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्याल नै दोहोरिने वा अन्य उमेदवार भन्ने टुङगो लागिसकेको छैन् । यसै सन्र्दभमा हामीले कृष्ण बस्यालसंग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।
नेपाली काँग्रेसबाट गाउपालिका अध्यक्षको उमेदवार तपाई नै हो भन्ने छ नी ?
यो सुभेच्छाको लागि धन्यवाद, तर म यसपटक उमेदवार होईन । मेरो मान्यता के भने एक पटक एउटा पदमा निर्वाचित भईसकेपछी दोहोरिन हुदैन् भन्ने छ । त्यसैले मैले अन्य साथीहरुलाई मार्गप्रसस्त गरेको छु । म गाउँपालिका अध्यक्षमा उमेदवार बन्ने सोचमा छैन् । यो कार्यकालमा जे जत ीगर्न सके सबै माझ छर्लङग नै छ । अव मैले चुनाव हाक्ने र साथीहरुलाई विजयी गराउने हो, म चुनाव लड्ने होइन ।
त्यसोभए अवको उमेदवार को हो त ?
म संगै ५ वर्षको कार्यकालमा अन्य साथीहरु पनि निर्वाचित भएर काम गर्नुभयो । वडाअध्यक्ष भएर पनि गाउँपालिकाका धेरै कामहरु गर्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गाउँपालिका हाक्न सक्षम हुनुहुन्छ । पार्टीमा नेतृत्व गरेका अनुभवी साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, उँहाहरु पनि सक्षम हुनुहुन्छ । बगनासकालीमा नेतृत् वगर्नेहरुको कमी छैन् । धेरै साथीहरु सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँहरु अगाडि आउनुपर्छ । मैले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
। मैले यो नै उमेदवार ठिक, यो वेठिक भन्दिन । सबै साथीहरु सक्षम हुनुहुन्छ । कोही स्थानीय तहमा काम गरेर अनुभवी हुनुहुन्छ, कोही पार्टी नेतृत्व गर्दै गएर सक्षम हुनुहुन्छ । पार्टीले उठाएको व्यक्ति नै हाम्रो उमेदवार हो । उसलाई जिताउने मेरो कर्तव्य हो । यो व्यक्ति, त्यो व्यक्ति भन्ने हुँदैन् । अन्त्यमा फेरी पनि भन्छु, दोहोरिने सोंचमा छैन्, सक्षम साथीहरु हुनुहुन्छ, मार्गप्रसस्त गर्छु ।